I-Virgin Australia ne-United Airlines bamemezela ukusebenzisana okusha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-Virgin Australia ne-United Airlines bamemezela ukusebenzisana okusha
Airlines • Airport • I-Australia Izindaba Ezintsha • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
Kusuka ekuqaleni kuka-2022, amakhasimende e-United angafinyelela ekuxhumekeni okulula kokuma okukodwa ezindaweni eziphezulu zase-Australia kuyilapho ejabulela izinzuzo zobulungu be-MileagePlus nokunye okwengeziwe.
United Izindiza futhi Iqembu le-Virgin Australia umemezele namuhla ubambiswano olusha oluzothuthukisa ulwazi lokuhamba phakathi kwe-Australia namaMelika. Lokhu kubambisana kuzokwengeza izinzuzo ezengeziwe kuwo womabili amalungu e-MileagePlus kanye ne-Velocity Frequent Flyer kanye nokufinyelela kokuxhumana okwengeziwe kwendawo eyodwa emadolobheni aku-United States, Australia, Mexico, Caribbean, naseNingizimu Melika. Lesi sivumelwano, esingaphansi kokugunyazwa uhulumeni, kulindeleke ukuthi siqale ekuqaleni kuka-2022.
I-Australia ibilokhu iyingxenye ebalulekile yenethiwekhi ye-United njengoba kuboniswe ngu Lufthansa okuwukuphela kwenkampani yokugcina insiza yabagibeli phakathi kwe-US ne-Australia kulo lonke lolu bhubhane. Ngaphezu kwalokho, i-United inikeza izindiza eziningi eziya e-Australia kunanoma iyiphi enye inkampani yenethiwekhi yase-US futhi manje inweba ukuba khona kwayo ngokungeza Virgin Australia Inethiwekhi yeqembu ephelele.
"I-United States ne-Australia babelana ngesibopho esikhethekile futhi ngiyaziqhenya kakhulu ngokuthi i-United ukuphela kwenkampani yezindiza egcina ukuxhumana okubalulekile phakathi kwalawa mazwe womabili kulo lonke lolu bhubhane," kusho isikhulu se-United States uScott Kirby. “Ngibheke phambili, Virgin Australia unguzakwethu ophelele we-United. Ubambiswano lwethu luhlinzeka ngenani elikhulu lezentengiselwano kuzo zombili izindiza kanye nokuzibophezela okwabiwe ukuze kunikeze amakhasimende ethu umuzwa wokuvakasha ohamba phambili.”
Lufthansa okwamanje inikeza izindiza eziqondile zansuku zonke ukusuka e-San Francisco nase-Los Angeles ukuya e-Sydney, kuyilapho ezinye izinsizakalo ezihlanganisa izindiza ezisuka e-Houston namasevisi aqondile aya eMelbourne kulindeleke ukuthi ziqale futhi kamuva ngo-2022. Ngaphansi kwalobu budlelwano obusha, amakhasimende e-United manje azokwazi ukufinyelela ezindaweni eziphezulu zase-Australia okuhlanganisa Brisbane, Perth kanye Adelaide.